Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Construction, Skilled Workers အလုပ်အကိုင်များ
စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာ Jobs in Myanmar
စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာ အလုပ် 121 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
- To be hired forainternational telecom company. - To be assigned for telecom sites across the nation wide area in Myanmar. - To be responsible for fuel stroe, transportation & consumption contol process.
Recruiter active 43 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Recruiter active 46 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
King River international Trading
• IVC, IP အမျိုးအစားအားလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာတပ်ဆင်နိုင်ရမည်။ • ရိုးသားကြိုးစားပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ • အတတ်ပညာပိုင်းကို ဝါသနာပါပြီး တိုးတက်ကြိုးစားလိုသူများကို ဦးစားပေးမည်
• ရေမော်တာစက်များ၊ ရေပိုက်လိုင်းများနှင့် မီးလိုင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ရမည်။ • ရိုးသားကြိုးစားပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
• အဲကွန်းတပ်ဆင်၊ ဆေးကြောရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ • ရိုးသားကြိုးစားပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ • အတတ်ပညာပိုင်းကို ဝါသနာပါပြီး တိုးတက်ကြိုးစားလိုသူများကို ဦးစားပေးမည်
Customer များ၏ နေအိမ်များတွင် အင်တာနက်စက်များ လိုက်လံတပ်ဆင်ပေးရန် Customer Complaints များ ဖြေရှင်းပေးရန် Customer အိမ်တွင် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်
FTTX Installation(Team Leader)
Customer များ၏ နေအိမ်များတွင် အင်တာနက်စက်များ လိုက်လံတပ်ဆင်ပေးရန် Customer Complaints များ ဖြေရှင်းပေးရန် Customer အိမ်တွင် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မိမိteam အား ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပေးရန်
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ တားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်း အရေးပေါ်အစီအစဉ်များနှင့် အခြားဖြေရှင်းနည်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း၊ ရေရှည်နှင့်ရေတို အကျိုးရလဒ်နှစ်ခုစလုံးကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။ ရလာဒ်များကို တိုင်းတာ၍ လိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ညှိနှိုင်းမှုများကို အဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များကို ချမှတ်ပြီး အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ Container Terminal နှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းပညာသင်တန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို သေချာစွာလေ့လာသုံးသပ်၍ တိုးတက်မှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ အဝန်ထမ်းများ၏ Performance Reviews များကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင် ပြုလုပ်ပြီးဘ အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ရမည်။ မိမိဌာန၏ Business Process Analysis , KPI Analysis များကိုလည်း ပြုလုပ်ရမည်။ မိမိ၏ရုံးတွင်းအဖွဲ့သားများအား အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။​​​​ CT equipment နှင့် installation ပိုင်းများကို အဆင်သင့်အနေအထားတွင် ရှိနေစေရန် ပြင်ဆင်ထားရမည်။ Container terminal ပိုင်းတွင် မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုများအားလုံးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းများကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ထားရှိရမည်။ procurement, operation, maintenance နှင့် upgrade Service များအတွက် အသုံးစရိတ်များကို မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ရမည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားစေရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးစံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ အလုပ်ကဏ္ဍများအားလုံး၏ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဘေးကင်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား၊ ဧရိယာများအလိုက်ကုန်ကျစရိတ်များကို သတ်မှတ်ထားသည့် ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်အတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်- ၁။ Rail Mounted Quay Cranes. ၂။ Rubber Tyred Electrical Gantry Cranes ၃။ Electrical Bus Bars ၄။ RST, ECH, FL and Hydra, weigh bridges, DG sets အဆင့်မြှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သတ်မှတ်ထားသောဘတ်ဂျက်အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးသပ်၍ ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ပြဿနာများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ Project အတွင်းလိုအပ်ချက်များကို အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Bonus - Uniform
ဝန်ချီစက်မောင်းသူ | Crane Operator
ရာထူး၏ အခန်းကဏ္ဍ - ကွန်တင်နာများ ဘေးကင်းစွာ အတင်၊အချပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသော လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်ကုန်တင်ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၏ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ Job Description - မိမိလုပ်ငန်းချိန်အတွင်း MHC ကို အဆိုင်းချထားသည့်အတိုင်းလည်ပတ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ - လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို SOP အတိုင်းစနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - ကွန်တိန်နာအတင်အချ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - အသုံးပြုပြီးသောကရိန်းများကို စစ်ဆေးပြီး ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက သတင်းပို့ရန်။ - Vessel မှ ITV သို့ကွန်တိန်နာများကို အပြန်အလှန်တင်ခြင်း၊ - MHC များကို နောက်အဆိုင်း တာဝန်ခံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ - လုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကို စနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များ - ညွှန်ကြားချက်များကို UHF/VHF များကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ရမည်။ - Yard Officer များဖြင့် တိကျသောညွှန်ကြားချက်များကို UHF/VHF များကို အသုံးပြု၍ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - PLC ၏ သတိပေးချက်များနှင့် Pop Message များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။ - ပစ္စည်းကိရိယာများကို Check list အတိုင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ - MHC ကရိန်းများ ပျက်စီးပါက အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ - ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့်အတူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: လုပ်ဆောင်မှုအရ အသိအမှတ်ပြုခြင်း
Car Painter And Repair
Car Painter and Repair for international car franchise
ဘွိုင်လာသမား | Boiler Maker
Boiler Maker for Manufactuing company in iternational clothing business
ROYAL AMT Construction
- Site survey ပြုလုပ်နိုင်ရမည် -Hand calculation - RC / Steel Structure နှစ်မျိုးလုံး ရေးဆွဲတွက်ချက်နိုင်ရမည် - Auto CAD 2D /3D ရေးဆွဲနိုင်ရမည် - E Tab ကောင်းမွန်စွာသုံးနိုင်ရမည် နှစ်ထပ်ခွဲသုံးထပ် အဆောက်အဦးကိုတစ်ယောက်ထဲကောင်းစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်
- Auto Cad 2D ဗားရှင်း 2019 ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Interior Design နှင့် အသေးစိတ်ပုံများဆွဲနိုင်လျှင်ဦးစားပေးမည်။ - Photoshop & Illustrator များ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - 3D maxဆွဲနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသည်။(ဦးစားပေးမဟုတ်ပါ) - ကောင်းမွန်သော အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ - To be able to work under intense pressure and team environment.
CAD And CAM Jewellery Designer
ကျောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ | Stone Specialist
- ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး စိတ်သန်းရှိ ၍ ဖန်တီးလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - လက်ရာကောင်းမွန်ပြီး ၊ သေသပ်လှပ၍ အနုပညာမြောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူ ဖြစ်ရမည်။ - အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အပျက်အစီးနည်းပါးစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Bonus, Annual Trip Allowance Overtime Payment Reward Management
Central Operation Staff (CCR) -Nga Zun Township
*အစီအစဥ်အလိုက် ထုတ်လုပ်ရေး တာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ *ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအား တိတိကျကျ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ *လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးမပြုမီ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ခြင်းရှိနေကြောင်း အာမခံရမည်။ *ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်အား မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်ရမည်။ *စနစ်များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ဆေးနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဥ်များအား ကွပ်ကဲနေရမည်။ *လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မူမမှန်ဖြစ်ရပ်များရှိပါက သတိပြုမိရမည်။ *မိမိကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်သော မူမမှန်ဖြစ်စဥ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်သို့ ချက်ချင်းအစီစဥ်ခံရမည်။ *စံနှုန်းအလိုက် ထုတ်လုပ်ရေး Batch များအား စစ်ဆေး ထိန်းညှိရမည်။ *စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအလိုက် စက်ရုံနှင့် စက်ကရိယာများအား သေသေချာချာ သန့်ရှင်းရမည်။ *ထုတ်လုပ်ရေးမစတင်ခင် ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများ ပြင်ဆင်ရမည်။ *မှတ်စုများမှတ်သားထားပီး ထုတ်လုပ်ရေး အဆိုင်းခေါင်းဆောင်အားနေ့စဥ် Operation အစီရင်ခံစာအား ပို့ပေးရမည်။ *ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် လုပ်ဆောင့်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်ရမည်။ *ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ယဥ်ကျေးမှုအား တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာရမည်။ *သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှ ချမှတ်ပေးထားသော တာ၀န်များ၊ extrusion machine၊ tablet press machine များအား မောင်းနှင်ခြင်းလုပ်ကိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Rewards over performance
ဆိုက်မန်နေဂျာ | Site Manager
- ဆောက်လုပ်ရေးအသေးစိတ်ပုံဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ လုပ်သားနှင့် ပစ္စည်းများ စီစဉ်ပေးရမည်။ - အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပရောဂျက်အချိန်ဇယားနှင့်ဆိုက်အစီရင်ခံချက်အား စီမံခန့်ခွဲမှုထံတင်ပြရမည်။ - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့် ပရောဂျက်အဖွဲ့ကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Architect (Female)
-well Visualization -AutoCAD -3D software(Sketchup or Revit) -Rendering & Modeling - Archi Drawing
Fiber Technician (For Pathein)
- Fiber Access Terminal မှ သုံးစွဲသူ၏ အဆောက်အအုံ၊ အိမ်နှင့် အခန်း စသည်တို့တွင် drop cable installation ကဲ့သို့သော fiber optic ကွန်ရက်ကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - ODNနှင့် FTTX Service End Userတို့အား Serveyပြုစုရမည်။ - Optical Distribution Frame (ODF)၊ Fiber Distribution Terminal (FDT)၊ Fiber Access Terminal (FAT)၊ Fiber Terminal Box (FTB) နှင့် Fiber Closure စသည်တို့ကဲ့သို့သော fiber cabinetများကို တပ်ဆင်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - Optical Distribution Network၊ ဖိုက်ဘာပုံးများနှင့် optical fiber cables များးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - Establishing new, and maintaining existing, relationships with customers. - Ability to climb poles isamust or ability to learn. - Adhere to all company safety policies and procedures
အကျိုးအမြတ်: - Performance ပေါ်မူတည်သော ဆုကြေးများရှိမည်။ - Meal Allowance - Phone bill Allowance - ဆိုင်ကယ် Allowance ရမည်။"
* သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းဆင္း Diploma / Certificate ရရွိသူ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
ရေးဆွဲသူ | Drafter, Drawer
Htet Paing Hein Design & Construction Group
AutoCAD ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနိုင်ရမည္ ။ ( Structure Drawing / Working Detail Drawing မ်ားဆြဲရန္ျဖစ္သည္) Sketchup ပါ ရရင် ပိုကောင်းသည် Deadline အမှီ အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ပုံဆွဲ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်